Moto Z4 gabi ahaanba wuu dusay: Snapdragon 675, shaashadda OLED, 25 MP kamarad sawir qaali ah iyo in ka badan | Androidsis
El Moto Z4 Waa casriga casriga ah ee Motorola. Waxay u imaan doontaa sidii bedelka kii Moto Z3, dhamaadka-sare ee la bilaabay sanadkii hore Snapdragon 835 hoostiisa hoostiisa, inyar, inkasta oo uu leeyahay SoC awood yar.
Waxaan horey uga soo hadalnay Moto Z4 a munaasabad la soo dhaafay. Hadda daabacaadda Hindida ayaa dhowaan la wadaagtay Moto Z4 waxyaabaha muhiimka ah iyo astaamaha, oo soo xiganaya macluumaad laga helay dukumiinti suuq geyn gudaha ah oo ka qarsoon shirkadda lafteeda.
Moto Z4: waa tan moobiilku noo hayo, sida ku cad xaraashka cusub
Moto Z4 ayaa bixinaya
Dukumiintiga sirta ah ee la helay ayaa shaaca ka qaaday in Motorola Moto Z4 wuxuu la imaan doonaa shaashad 6.4-inji ah oo loo yaqaan 'OLED' oo leh astaamo u eg-biyoodka. Shaashadda ayaa xambaari doonta taageerada xalinta FullHD + waxaana lagu dhex dari doonaa akhristaha faraha. Warbixinta cusub ayaa deynaysa daadadkii hore ee sheeganayay Moto Z4 wuxuu soo bandhigi doonaa shaashad 6.22-inji ah.
Nidaamka hawlgalka Android 9 Pie nuqulkeedii asalka ahaa ayaa laga heli karaa qalabka. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale ku jiri doontaa qaar ka mid ah astaamaha Motorola, sida Moto Display, Moto Actions, iyo Moto Experiences. Markeeda, madal mobile Snapdragon 675 awood u siin doono taleefanka casriga ah. Waxay noqon doontaa aalad 5G-diyaar ah maadaama la filayo inay taageerto 5G Moto Mod iyada oo loo marayo 16-pin pogo isku xiraha dhabarka.
Moto Z4 waxaa lagu qalabeyn doonaa hal 48 megapixel camera gadaal. Waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa taageero loogu talagalay sawir qaadista muuqaalka habeenkii iyada oo loo marayo muuqaal la yiraahdo Night Vision. Si loo qabsado sawir-qaadaha, waxaa lagu qalabeyn doonaa kamarad dhan 25 megapixel. Xaaladaha iftiinka yar, tikniyoolajiyadda Quad Pixel waxay soo qaban doontaa sawirro cad oo 6 megapixel ah. Telefoonada casriga ah ayaa lagu qalabeyn doonaa shaqooyinka sawir qaadista ee AI-ku shaqeeya iyo istiikarada AR. (Ogow: Motorola si ay u daahfuraan dhowr taleefano oo ay la socoto Android One dhowaan)
Terminalka waxaa sidoo kale ku jiri doona a 3,600 mAh baytari oo la imaan doonta tikniyoolajiyad degdeg ah oo lagu buuxiyo TurboCharge. Waxaa la filayaa inay la timaado jir firidhsan u adkaysi leh isla markaana lagu soo bandhigo qalab maqalkiisu yahay 3,5mm.
Qiimaha taleefanka casriga ah ayaa ka hooseeya xirmooyinka. Si kastaba ha noqotee, daadinta ayaa muujineysa Moto Z4 inay ku kacayso kala bar qiimaha taleefannada calanka. Sidaa darteed, waxaa lagu qiimeyn karaa qiyaastii $ 400 illaa $ 500.
Ugu dambeyntiina, waxaa xusid mudan in xogtii hore ay daaha ka rogtay in aaladda loo heli doono noocyo kala duwan sida 4 GB oo RAM ah + 64 GB oo keyd ah iyo 6 GB oo RAM ah + 128 GB oo keyd ah iyo in wax macluumaad ah weli lagama hayo taariikhda la soo saaray taleefanka casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Moto Z4 gabi ahaanba wuu dusay: Snapdragon 675, shaashadda OLED, kamarad sawir qaade 25 MP ah iyo inbadan